Azerbaijan · Febroary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Azerbaijan · Febroary, 2019
Tantara mikasika ny Azerbaijan tamin'ny Febroary, 2019
Azerbaijan: Navotsotra ireo ‘bilaogera ampondra’
Hafanam-po 28 Febroary 2019
Navotsotra tamin'ny faran'ity herinandro ity ireo tanora mpikatroka bilaogy lahatsary ao Azerbaijan, repoblika sovietika teo aloha manankarenaika solika. Nogadraina tamin'ny 8 Jolay 2009 i Adnan Hajizade, mpiara-manorina ny OL! Youth Movement, sy Emin Milli, mpiara-nanorina ny Alumni Network (AN).
Azerbaijan: ilay Toerana Fivahinianana “Death Star”
Fampandrosoana 07 Febroary 2019
Raha jerena indray mipi-maso ity toerana fivahinianana ity dia toa mahavariana sy mitodika sahady amin'ny hoavy, misy fitoviana be amin'ilay Death Star hita anatin'ny Star Wars. Mahagaga anefa fa tsy any Las Vegas na koa any Dubai no hatsangana izy io, fa kasaina aorina any Baku, renivohitry ny Repoblikan'i Azerbaijan.
Azerbaijan: Tsy afaka nidirana ny tranonkala nanohanana ny mpikatroka
Hafanam-po 07 Febroary 2019
Araka ny tatitra avy amin'ny Önər Blog, handinika indray ny raharahan'i Emin Milli sy Adnan Hajizade ny Fitsarana Avo ao Baku. Voadaroka sy voasambotra ary voaheloka ireo bilaogera sady mpikatroka tanora roa ireo .Ny omalin'iny anefa dia tsy nisokatra ny iray tamin'ireo vohikala izay noforonina ho fiarovana azy ireo .
Fahalalahàna miteny 05 Febroary 2019
Ireo pejinay momba an i Azerbaijan